Borås: 16 jir gabar soomaali ah oo meydkeedii laga helay maqaasiin | Somaliska
Magaaladda Borås ee galbeedka Iswiidhan, ayaa waxaa habeenimadii sabtida soo galay waxaa meeydkeeda laga helay gabar soomaaliyeed oo lix iyo toban jir ah, maqaasiinka alaabtada la dhigto ee källare-ha loo yaqaano.
Gabadhan ayaa waxaa ka muuqdhay dhaawac ah in la ceejiyey oo cunaha lugu dhagay. Gabadhan oo eeysan magaceeda noo suuragalin inaan helno, ayaa waxaa reerkii ay tabeen maalintii jimcaha gelinkii dambe sida warku nugu soo gaaray. Booliska oo lugu wargeliyey ayaa muddo ka dib meeydkii ka helay maqaasiinka hoose ee xaafadda ay ka degan yihiin.
Lama oga cidda dishay iyo sababta ka dambeeysa dilkeeda. Hase ahaatee ilaa iyo iminka waxaa socda baaritaan la xirriirta sababta keentay in cunaha lugu dhago. Xirriiro aan la sameeynay dadka soomaalida ee degan degmadaas ayaan suuragal noo noqon inaan helno macluumaad intaan ka badan.
Gabadhan soomaaliyeed ee lix iyo toban jirka ah ayaa ah ardayad dhiganeeysa fasalka koowaad ee dugsiga sare. Waxaana reerkeeda ugu wardambeeysay arroonimadii jicmaha kolkii ay iskuulka aaday.
Walax qaraxa oo lugu tuuray masaajid ku yaala magaaladda Stockholm
Soomaalida Falköping oo loo sheegay in ay isagabaxaan Sweden
Dowladda Iswiidhan oo ciidanka booliska u qoondeeysay adduun gaaraya 7,1 milyaardi